ओलीले प्रचण्डलाई भने, 'अब पार्टी फुट्यो, तपाईँ मसँग हुने कि माधव नेपालको पार्टीमा ?' | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
पछिल्लो २४ घन्टामा ३७८ जनामा कोरोना संक्रमण : संक्रमितको संख्या २२,५९२ पुग्यो
ओलीले प्रचण्डलाई भने, 'अब पार्टी फुट्यो, तपाईँ मसँग हुने कि माधव नेपालको पार्टीमा ?'
access_time२०७७ साल असार १९ गते, शुक्रबार ०९:१३ PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि आज अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच बालुवाटारमा झण्डै तीन घन्टा भेटवार्ता भएको छ ।
भेटमा सहभागी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले बाहिरीने क्रममा दुई अध्यक्षबीच खुलस्त र सकरात्मक कुराकानी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
भेटवार्तापछि ओलीले बालुवाटारमा र प्रचण्डले आफ्नो निवासमा आफू निकट नेताहरुसँग परामर्श गरे । परामर्शका क्रममा प्रचण्डले दिउँसोको भेटवार्ता बारेमा जानकारी दिए । उनले अन्तिम समयसम्म पनि आफू पार्टी एकताका लागि लागि पर्ने बताएका छन् ।
खुमलटारमा भएको परामर्शका क्रममा प्रचण्डले बालुवाटार बैठकमा ओलीको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराए । उनले भने, 'मैले पार्टी एकताको मर्म, कार्यकर्ताको भावना र देशकै आवश्यकताका लागि पार्टी एकता कायम गरौँ मिलेर जाऊँ भने । तर उहाँले मिल्ने कुरा गर्नु भएको छैन । उहाँले पटक पटक अब पार्टी फुट्यो भनेर एकताको कुरामा ध्यान दिनु भएन ।'
प्रचण्डले आफूले विगतको सहमति कार्यान्वयन गरेर जानका लागि आग्रह गर्दा पनि ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताए । ओलीले प्रचण्डलाई 'माधव नेपालसँग वा आफूमध्ये कोसँग मिल्ने' भनेर प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डले भने, 'उहाँले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाहेकमा छलफल गर्न सकिएला । तर अन्य च्याप्टर ग्लोज भइसकेको भन्नु भयो । पार्टी फुटेकै छ । अब बरु तपाईँ र मसँगै बसौँ । तपाईँ मसँग हुने कि माधव नेपालको पार्टीमा ? भनेर नयाँ कुरा गर्नुभयो ।'
आफू निकटका नेताहरुसँगको छलफलमा प्रचण्डले आफूले भोलि बैठक अघिसम्म पनि पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने बताए । प्रचण्डले छलफलमा भने, 'मैले ठूलो त्याग, बालिदान र कार्यकर्ताको भावनासँग जोडिएर अनेक खालका अवसर पनि त्यागेर पार्टी एकता गरेको हुँ । यो पार्टी जोगाउनका लागि म लाग्छु । भोलि बिहानसम्म पनि उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने कोषिश गर्छु । अन्य साथीहरुले पनि प्रयास गरौँ । '
प्रधानमन्त्री ओलीले अडान नछाडेपछि प्रचण्डले आफूले विगतमा गरेको अपमानको पनि स्मरण गरे । उनले भने, 'मैले प्रधानमन्त्री पनि त्यागेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेँ । त्यसपछि एउटाले सरकार र अर्काले पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा भयो । आधा आधा कार्यकाल पनि मैले नै छाडेँ । सबैकुरा छाडेर पार्टी एकता र जनमतलाई सम्मान गर्दै जाँदा पनि उहाँले पार्टी फुटाउने कुरा, राम्रो भएन ।'
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले सबै नेतालाई अन्तिम समयसम्म पनि पार्टी एकता कायम गर्नकै लागि जुट्न आग्रह गरेका छन् । युवा विद्यार्थी नेताहरुलाई पनि उनले संयमित र पार्टी एकताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन आग्रह गरे । अर्को पक्षलाई होच्याउने, हेप्ने र पार्टी एकताविरुद्ध हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पनि प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् ।